I-Sun Country Airlines yongeza iTucson kunye neAruba njengendawo ekuyiwa kuyo | Iindaba zeenqwelo moya
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeenqwelo moya » I-Sun Country Airlines yongeza iTucson kunye neAruba njengendawo ekuyiwa kuyo
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zokuhamba zeAruba • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukukhutshwa kweendaba • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ze-USA
I-Sun Country Airlines yongeza iTucson kunye neAruba njengendawo ekuyiwa kuyo
Ngamana 10, 2017
I-Sun Country Airlines namhlanje ibhengeza iindawo ezimbini ezintsha ezingamisiyo zonyaka ezivela IMinneapolis / iSt. UPaul, eMinnesota (MSP), ngenkonzo engacwangciswanga kuphela Arubha (AUA), kunye nenkonzo ecwangcisiweyo ETucson, eArizona (TUS), njengoko ityhila ishedyuli yasebusika / yasentwasahlobo ka-2018. Iinqwelomoya ezintsha zibonelela ngeLanga leLanga®abathengi bafikelela ngokuthe ngqo kwindawo edumileyo yeholide kuLwandle lweCaribbean, kunye nenketho entsha yokufika kuyo I-Arizona isixeko esidumileyo saseSonoran Desert. Unikelo olutsha lwenkonzo luyanda IMinnesota I-Airline yaseKhaya ™ ukuya kwiindawo ezingama-41.
Iinqwelomoya zexesha elithile ukuya Arubha kwaye eTucson ziya kunikwa Disemba 2017 ngokusebenzisa April 2018 ngokusebenzisa Minneapolis / St. UPawulos Isikhululo senqwelomoya, iTheminali yesi-2 Arubha izakubandakanya inqwelomoya enye ngeveki, emka ngeMigqibelo ukusuka Ngomhla wama-23 ukuya ku-Epreli 7. Ukuya ku eTucson ziya kufumaneka kwi Ngomhla wama-21 ukuya ku-Epreli 15, ngeenqwelomoya ezishiya uLwesibini, uLwesine kunye neCawa.
Kubahambi baseMidwest, hamba ngqo uye Arubha ibonelela ngokubaleka ngokulula kwisiqithi esihle kuLwandle lweCaribbean, ngaphandle konxweme lwe amazantsi Emelika. Abahambi baya kufumana enye yezona ziqithi zishushu kwi Caribbean kwincopho yexesha lasebusika laseMidwest.
“Ngokudibanisa Arubha kwiindawo zethu, sijonge phambili ekunikeni abahambi bethu baseMidwest ithuba lokuya kwilizwe elidume kwilizwe liphela Caribbean Isiqithi esiphakathi kwexesha lethu lobusika, ”utsho UZarir Erani, UMongameli welizwe kunye ne-CEO yelizwe. "Sizimisele ukuqala ukusebenzisana nesikhululo senqwelomoya saseQueen Beatrix ukuze abahambi bethu bafumane yonke into esinokuyifumana kwesi siqithi."
“Siyavuya kakhulu sisibhengezo seLanga leLanga sokuqalisa inkonzo entsha yokungamisi Arubha. Le ndlela intsha iya kunika iindwendwe ezivela Minneapolis / St. UPawuloskunye neendawo ezikufutshane nendlela entsha nefanelekileyo yokutyelela isiqithi sethu esihle. Siyakuxabisa ukuzithemba kwelanga leLanga kwindawo esiya kuyo kwaye sijonge phambili kubambiswano olukhulu kwiminyaka ezayo, ”utshilo uMnu. UJames Fazio, IGosa eliyiNtloko lesiGqeba seAruba Airport Authority NV
“Ukuhamba ngenqwelo moya ngenqwelomoya kubalulekile YeAruba ukuqhubeka kwempumelelo kwezokhenketho- kwaye le nkonzo intsha ingapheli Minneapolis / St. UPawulos ikwanelisa iimfuno zabakhenkethi baseMelika, abathe babonisa ukwanda kokundwendwela isiqithi sethu kule minyaka idlulileyo, utshilo uRonella Tjin Asjoe-Croes, CEO weAruba Tourism Authority. "Arubha iyawubulela umanyano lwayo olukhulayo kunye ne-Sun Country Airlines, kwaye ijonge ukwazisa iindwendwe ezintsha kububele bethu obufudumeleyo, inkcubeko yokwenene kunye namabhishi adumileyo kwihlabathi. ”
Entlango yeNtlango yeSonoran yohlobo olunye, eTucson uyaziqhenya ngokungathobeki, enika abahambi baseMidwest ithuba lokufumana imisebenzi yangaphandle evela ngebhayisikile kunye nokunyuka kwentaba ukuya kwigalufa okanye echibini lokuphumla. Ebusuku, isixeko sinobugcisa obukhulayo, ukutya kunye nokuzonwabisa. eTucson yindawo yesibini yelizwe leLanga Arizona.
"Arizona yindawo ethandwayo yabakhenkethi kubahambi baseMidwest kwaye sonwabile ukongeza inkcubeko kunye nobugcisa be eTucson ecaleni kwenkonzo yethu ukuya Phoenix, ”Utshilo u-Erani. “Sijonge ukubhabha eTucson Isikhululo senqwelomoya samanye amazwe njengoko abahambi bethu betyelele isixeko esikhula rhoqo I-Arizona Imozulu entle yasentlango. ”
“Siyavuya ukwamkela iSun Country Airlines ukuba eTucson Isikhululo senqwelomoya, ”utshilo UBonnie Allin, Mongameli kunye ne-CEO ye-Tucson Airport Authority. “Sijonge ngokukodwa ekwamkeleni abantu abaninzi baseMinnesotan kumazantsi wethu awodwa Arizona Intlango kwaye sinandipha ilanga lethu lasebusika. ”
Iiphakheji zokuhamba ngenqwelomoya kunye neehotele kuzo zombini ezi ndawo ziya kufumaneka ngeeholide zelizwe lelanga®. Ukongeza, ishedyuli yasebusika yelizwe leLanga yazo zonke iindawo ekukuyo ngoku iyathengiswa kunye nemihla yokubhabha ngo-Epreli 2018.